ကင်မရာ ၁၆ လုံးနဲ့မြင်တွေ့ရမယ့် LG စမတ်ဖုန်း ?) – AsiaApps
ကင်မရာ ၁၆ လုံးနဲ့မြင်တွေ့ရမယ့် LG စမတ်ဖုန်း ?)
November 26, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on ကင်မရာ ၁၆ လုံးနဲ့မြင်တွေ့ရမယ့် LG စမတ်ဖုန်း ?)
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်လောက်က ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းလေးတွေမှာဆိုရင် Back camera တစ်ခုလုံးတည်းသာရှိခဲ့ပြီး ကင်မရာပါတယ်ဆိုရုံလောက်ပဲ စမတ်ဖုန်း ဖန်တီးသူတွေက တပ်ဆင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တော့ Front camera ဆိုပြီးဖုန်းအရှေ့မျက်နှာပြင်မှာ Selfie ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ ကင်မရာနှစ်လုံးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Back camera တစ်ခုကနေ Dual ကင်မရာဆိုပြီး တစ်လုံးတိုးချဲ့လိုက်တာကြောင့် စမတ်ဖုန်းတစ်ခုမှာ ကင်မရာ ၃ လုံးအထိဖြစ်လာခဲ့တာ ကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ပါပဲ။ အဲ့နောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ အခု ၂၀၁၈ မှာတော့ Back dual ကင်မရာအပြင် ကင်မရာနောက်တစ်လုံးကို အနောက်ဘက်မှာထပ်မံထည့်သွင်းပေးလိုက်တာကြောင့် Main camera ၄ လုံးအထိရှိတဲ့ စမတ်ဖုန်းမော်ဒယ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်လာရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်တလောမှာတော့ ကင်မရာပိုင်း modification မှာ Main ကင်မရာ ၄ လုံးပါတာ lastest လို့ဆိုနိုင်ပေမယ့် နောက်ထပ်သူ့ကို ကျော်တက်မယ့် ကင်မရာ ၅ လုံးပါ စမတ်ဖုန်းမော်ဒယ်ကို Nokia ကထုတ်လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ rumors တွေကလည်းစောင့်ကြိုနေပြန်ပါတယ်။
ဒီ ကင်မရာအလုံးအရေအတွက်ကိုကြည့်ပြီး များလှချီလား ဆိုပြီးမအံ့သြလိုက်ပါနဲ့ဉီး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ LG က မိတ်ဆွေများလှချီလားလို့ထင်တဲ့ အရေအတွက်ရဲ့ ၃ ဆအထိကင်မရာအလုံးရေပါဝင်တဲ့ စမတ်ဖုန်း device ဖန်တီးမှုအတွက်စဉ်းစားနေပြီမလို့ပါ။ ?) ကင်မရာ ၁၆ လုံးကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထည့်သွင်းထားဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲထားလဲဆိုတာကိုတော့ အောက်က ဒီဇိုင်း concept မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အပေါ်ကဒီဇိုင်း concept ကတော့ US မှာ patent ရပြီးသား LG ရဲ့ဒီဇိုင်းပုံရိပ်တွေကို LetsGoDigital ကပြန်လည်ဖော်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Patent ရပြီးသားဖြစ်တာမို့ ထွက်ရှိလာရင် ဒီဇိုင်းအနေအထားကလည်း ပုံမှာဖော်ပြထားတဲ့ ၆ ခုထဲကတစ်ခုပဲဖြစ်နေမှာပါ။ ဖုန်းမှာတပ်ဆင်လာနိုင်တဲ့ခန့်မှန်းပုံရိပ်ကတော့ ? မှာပါ။
မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ဒီဖုန်းမှာ ကင်မရာတစ်ခါအသုံးပြုလိုက်တာနဲ့ Back camera lenses ၁၆ ခုလုံးက ရိုက်ကူးပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး ရိုက်ကူးပြီးတဲ့အချိန် ပုံရိပ်ကို စိတ်ကြိုက်ပြန်လည် ရွေးချယ်နိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ ကင်မရာရဲ့ Portrait mode ကလည်းသိသိသာသာကောင်းမွန်လာဉီးမှာဖြစ်သလို ရိုက်ကူးလိုက်တဲ့အချိန် focus မှားချိန်မိရင်လည်း Focus တည်နေရာကိုပြန်လည်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ edit feature ကိုလည်းပါဝင်နေဉီးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Back camera ကိုတော့ ရှယ်လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ Front selfie ကင်မရာကရော? Front ကင်မရာကတော့ lense ၁ ခုနဲ့ပဲရောက်ရှိလာမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်မပူပါနဲ့.. Back camera ကရှယ်ဖြစ်နေပြီးသားမို့ မှန်တစ်ချပ်ကို အသုံးပြုပြီး selfie ဆွဲလိုက်ပါ။ ?) ဒီဇိုင်း concept ထွက်ရှိလာပြီး US မှာလည်း Patent ရနေပြီးသားဖြစ်တာမို့ လအနည်းငယ်ပဲ စောင့်ရမယ်လို့တော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မျှော်မှန်းထားလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဂျီးများတာတော့မဟုတ်ပေမယ့် ဒီလိုကင်မရာကြီးကိုရှယ်ထည့်လာတာကတော့ ကျွန်တော် normal user တစ်ယောက်အနေနဲ့ တကယ်ကိုသဘောမတွေ့မိပါဘူး။ ရှယ်ထည့်ထားသလို လက်တွေ့မှာလည်းရှယ်ကောင်းနေရင်တော့ တမျိုးပေါ့ ?).. ဒီလိုဖုန်းတစ်လုံးမှာ lense တွေအများကြီးထည့်တဲ့အပေါ်ကိုရော မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်လဲဗျ? ကွန်းမန့်လေးမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
သီချင်းတွေကိုအလွယ်​တကူဖြတ်​​တောက်​နိုင်​မယ့် mp3 cutter and joiner application